Ogaden News Agency (ONA) – N/hure Maxamed Shariif oo khadka telefoonka kaga qayb galay shirkii JOKA ee xubnahii mutaystay lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf
N/hure Maxamed Shariif oo khadka telefoonka kaga qayb galay shirkii JOKA ee xubnahii mutaystay lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf
Posted by ONA Admin	/ November 26, 2013
Waxaa maanta oo ay taariikhdu kubeegnayd 25/11/2013 wadanka koonfur afrika ka dhacay shirarkii bilaha ahaa ee ay isugu imaan jireen xubnaha JOKA kuwaas oo kakala dhacay Xarunta JOKA iyo Faraca Gauteng.
Dhamaan shirarkan oo isku ujeedo ahaa ayaan lagu gaadhay qorshayaan loogu talagalay in kor loogu qaado qadiyada ogaadeniya ee wadanakan Koonfur Afrika, waxayna kusoo dhamaadeen si guul ah.
Gaar ahaan waxaa shir ballaadhan isugu yimid xubnaha jaaliyadda K/Afrika ee gobolka Eastern Cape shirkan oo lagu qabtay xarunta jaaliyadda JOKA ee UITENHAGE ayaa waxaa isugu yimid xubnaha jaaliyadda kuwaasi oo ay wajigooda ka muuqatay shucuur qadiyadeed iyo mid wadaniyeed.
Shirkan oo uu gudoominayay gudoomiyaha jaaliyadda mudane C/raxmaan Siciid ayaa waxaa wacdi diini ah kufuray sheekh Shaafi Cabdi ka dibna waxaa khadka taleefonka si toos ah ugala qaybgalay jaaliyadda n/hure Maxamed Shariif oo xubnaha siiyay warbixin aad u qiimo badan oo meela kala duwan oo kaga waramay. Waxaa isna shirka kahadlay hogaaanka HAAU ee jaaliyadda JOKA mudane Faysal Cismaan oo xubnaha uga mahadceliayay ka qaybqaadashada abaabulka hufan ee ay jaliyaddu kawado wadankan K/Afirika isagoo sidoo kale uga digay xubnaha halista ay leedahay bishan December talabixino wax ku ool ahna ka siiyay wakhtiyada ay khatartu ku dhici karto.
Intaasi kadib gudoomiyaha JOKA ayaa soo bandhigay cashir aad u qiimo badan oo loogu tala galay inay kafaaiidaystaan xubnuhu kaasoo loogu magacdaray BARASHADA DHULKAAGAA BARYO LA ISKU HAWLAA kaasoo sida kamuuqatay cinwaankiisu ku saabsanaa barashada guud ahaanba dalkeena Ogadenia.
Waxaa sidoo kale mawduuc diini ah si siminaar ah uga akhriyay Hogaanka Dacwada sheeekh Shaafi oo mawduuciisu ku saabsana tawxiidka.
Ugu danbayntiina waxaa shirka shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay xubno katirsan Ururka Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadeniya(O.Y.S.U) ee gobolkan Eastern Cape, xubnahan oo ahaa xubnihii wacdaraha layaabka leh kadhigay kulamadii maalinta qoxootiga aduunka iyo maalinta dulqaadka aduunka (REFUGEE DAY AND NATIONAL TOLERANCE DAY) , kuwaasi oo ay xubnahani ka soo hooyeen guulo aad u balaadhan.